के तपाईंलाई थाहा छ कलमको बिर्कोको टुप्पोमा 'प्वाल' हुने कारण ?
scheduleशुक्रवार आषाढ़ १९ गते, २०७७
यस्तो पनि, विज्ञान / प्रविधि
के तपाईंलाई थाहा छ कलमको बिर्कोको टुप्पोमा ‘प्वाल’ हुने कारण ?
जुनकुनै युगमा पनि पेनको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुने गरेको पाइन्छ । तर, अहिले कम्प्युटरले यसको प्रयोग बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । तर तपाईले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, प्रायः पेनको बिर्कोमा अर्थात् टुप्पोमा एउटा प्वाल किन हुन्छ ?
एक अवधारणाअनुसार, कलमको रिफिलको मसी नसुकोस् भन्नाको लागि पेनको टुप्पोमा प्वाल राखिने प्रचलन रहेको छ । तर यो भनाइलाई नमान्न पनि सकिन्छ, किनकी यो तथ्य मसी सुक्ने र नसुक्नेसँग मात्र सम्बन्धित छ ।
यस सम्बन्धित अर्को अवधारणा पनि रहिआएको छ, प्वालले पेन बन्द हुँदा र खुल्दा हावा सञ्चालन गराउँदछ र मसीलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँछ । यो सब बिर्को खुल्ने र बन्द हुने पेनका लागि मान्य हुन्छ । घुमाएर बन्द हुने पेनका लागि भने यो मान्य हुँदैन ।
पेनको टुप्पोमा प्वाल किन राखिएको भन्ने विषयमा अनेकन धारणाहरु प्रस्तुत हुने गरेको भएपनि यसको खास कारण भने अर्कै छ ।
यो हो मुख्य कारणः
खासगरी बच्चा तथा अरु मानिसहरु पेन मुखमा हाल्ने बानीका कारण त्यसले मुखमा घोचेर असर गर्छ अथवा घातक हुनसक्छ । यदि मुखमा हाल्ने बानीका कारण झुक्किएर निलेमा त्यसमा हुने प्वालका कारण हावा बहन राम्रोसँग हुन्छ र भारी असर गर्दैन अन्यथा मानिसको ज्यान पनि जान सक्छ । त्यसका साथै त्यसमा हुने मसी बाहिर नआओस् भन्नका लागि पेनको ढकनीमा प्वाल राख्ने प्रचलन छ ।
यसैकारण पेन बनाउने कम्पनीहरुले पेनको बिर्कोको टुप्पोमा प्वाल राख्दै आएका छन् । जसकारण कोही बच्चाले भुलेर निलेमा केहीहदसम्म भएपनि खतरा कम हुनेछ । अहिले भने पेनको दुबै भागमा प्वाल राख्ने गरिएको छ ।
मन्त्रीले नै लकडाउनको नियम उल्लंघन गरेपछि …
प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादः सच्चा वा उपयोगवादी ?
‘राष्ट्रवाद’ हरेका देशका नागरीकका निमित्त निकै प्रिय शब्द होे । यो आम नागरिकहरुको मन मुटुमा रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा...
शनिबार फेरि छलफल गर्ने सहमतिसँगै ओली-प्रचण्डको आजको छलफल सकियो
काठमाडौं, १९ असार । करिब २ घण्टाजतिको ओली-प्रचण्डबीचको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ । यद्यपि भोलि स्थायी कमिटी बैठकअघि पुनः...
प्रचण्ड-नेपालले सरकार ढाल्ने, ओलीले पार्टी ढाल्ने!
काठमाडौं, १९ असार । दुई तिहाई नजिक रहेको नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजिएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन शुरु भएको...
भारतमा ८ जना प्रहरीको हत्या
एजेन्सी, १९ असार । भारतको उत्तरप्रदेशमा पर्ने कानपुर जिल्लामा डिप्टी एसपीसहित ८ जना प्रहरीको हत्या भएको छ । त्यस्तै सात जना...
एकता जोगाउन कस्सिँदै नेकपाका केही नेताहरु
फाइल फोटो प्रकाश सिलवाल/काठमाडौँ, १८ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी गम्भीर...
राष्ट्रपति ज्यू, जिम्मेवारीको दुरुपयोग नगर्नुस्, गणतन्त्रकै अवमूल्यन भयो : गगन थापा
काठमाडौं, १८ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको...
‘स्वतन्त्र हङकङ’ को माग गर्दै लाखौंको प्रदर्शनः के होला हङकङको भविष्य ?
काठमाडौं, १८ असार । गत मंगलबार चिनियाँ सरकारले हङकङको लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेसँगै जनअसन्तोष विष्फोट भएको...
गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा ओली प्रचण्डबीच छलफल
फाइल फोटो काठमाडौं, १९ असार । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई...